Ku soo Dhawow Website kan Cabdifataax
Dhacdooyinka Hargeisa ka dhaca maalin walba maxaad ka ogtahay
hablaha iyo wiilalka
GACMO FURAN KU SOODHAWAW DAWADE WAAD MAHADSANTAHAY ____________________?
SOMALILAND NEWS NETWORK (SNN)
SHABAKADDA WARARKA SOMALILAND"SNN"
SOMALILAND CONVENTION IN LOS-ANGLES,USA.
Tafsiirka Quraanka Kariimka ah. Tafsiirka Quraanka Kariimka ah.
Somaliland - Somalia .
"Door is closed" on Somalia - Somaliland talks. Reported by Afrol.
UPDATED SOMALILAND NEWS
Sunday July 24, 2005 Wararkii Somaliland ee Maanta."Halkan kala soco Wararkii u dambeeyey ee Somaliland iyo Weriye Rambo."(Xuskii Sannadguuradii Dagaalyahanaddii SNM oo lagu qabtay Somaliland.)Muj.Xasan Ciise ayaa halkaa ka jeediyey Qudbad dheer. .- Daily Reports from Maxamed Rambo.- Madaxweyne Rayaale iyo Wefti balaadhan oo uu hogaaminayo oo u socdaalay dalka Britain"Weftigaas Balaadhan waxa si weyn loogu sii sagootiyey Madaarka Hargeysa."(Waxa uu Madaxweyne Rayaale Khudbad ka jeedin doonaa Golaha Baarlamaanka ee Ingiriiska iyadoo la filayo inuu la kulmo Madax sar sare oo ka tirsan Midowga Yurubna.). .- Reported by Maxamed Rambo.-
daawo hargaisa hadaad ubahantahay dawade ku soodhawaw wadankaaga hooyo
maansoor hotel in somaliland
Hudheelkani waa hudheel caalmi ah oo dhawaan laga furay caasimada dalka Somaliland ee magaalada Hargeysa. Waxay muujinaysaa sida reer Somaliland ay ugu heelan yihiin dhulkoodi burburka iyo khasaaruhii gaadhay inay dib u dhistaan.
Waa National Theatre kii Hargeysa oo wali nabaradii faqashtu ku yaalaan oo lagaa sugayo dib u dhiskiisii.
Cid kale uma maqna ceelna uma qodna, nin la sugayoow maxaad sugi. Dhamaanteen dadka qurbaha joogaa ayay hawashani sugaysaa, maadaama aynu garansanahay qiimaha uu leeyahay hoyga Murtida iyo Madadaaladu. Waa meesha kaliya ee umad wliba ay suugaanteeda dhammaan ku soo bandhigto. Suugaan la'aani waa dhaqan la'aan.
waad nala sooxidhiidhi kartaa daawade ciwankayaga oo ah; cabdi_dhl@hotmail .com waad mahadsantahay
halkan riix hadaad ubahantahay inaad dhagaysato lasoco ha ka dhicin dhagayte webside kan c/fataax
KURAAXAYSO DALKAAGA HOOYO?
waxa uu idin ku bushaaraynayaa webside kan c/fataax in uu idinku soobiirin doono qaybo badan oo aad ka heli doontaan run ahaantiina idin cajab galin doona waa balan taasi daawade ama dhagayste
qayb ka mida somaliland hadad ubahantahay wad naga helaysaa